एक लाख वर्षपछि यस्तो देखिने छ मानिसको अनुहार, पत्याउनुहुन्छ ? - IAUA
बैज्ञानीक तथ्य रोचक प्रसंग
ramkrishna October 23, 2017	एक लाख वर्षपछि यस्तो देखिने छ मानिसको अनुहारपत्याउनुहुन्छ ?
वैज्ञानिक खोजबाट पत्ता लागेको कुरा हो कि मानिसको पूर्खा बाँदर हो । तपाईंले हेर्नुभयो भने बाँदरकोभन्दा हाम्रो अनुहार धेरै गुण राम्रो देखिन्छ । आठ लाख र दुई लाख वर्षको बीचमा पृथिवीको जलवायुमा आएको तीव्र परिवर्तनले मानव मस्तिष्क र खोपडीको आकार तीन गुणा बढाएको थियो । यसले गर्दा अनुहार थेप्चिन पुग्यो ।
एक लाख वर्षमा मानिसको अनुहारमा साह्रै ठूला आँखा हुनेछन् । आँखामा हरियो चमक आउनेछ । lokaantar
Previous Previous post: फलीफाप हुन्छ,बिहान उठ्ने बित्तिकै यी काम गर्नुहोस…
Next Next post: हिन्दु महिलाले पहिरिने चुरा, मंगलसुत्र र सिन्दुरसँग जोडिएको वैज्ञानिक कारण यस्तो छ